Brave Waves's Blog | တစ်စုံတစ်ရာအပေါ်တွင် ခံစားမိသော ကျွန်တော့အမြင် ကျွန်တော့အတွေး များသာဖြစ်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်တော် ခံစားမိသော အကြောင်းအရာတစ်ခုခု ကို ကျွန်တော့်အမြင်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
Brave Waves's Blog
မစားရညှော်ခံ နေရသော ရခိုင် ပြည်သူ ပြည်သားများ
April 21, 2013 — bravewaves
“မစားရညှော်ခံ နေရသော ရခိုင် ပြည်သူ ပြည်သားများ”
ပြည်ထောင်စုထဲရှိအခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင် လျှပ်စစ်မီး မီတာခတစ်ယူနစ်ကို ကျပ် ၅၀ နဲ့ရနေတဲ့အချိန်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်သောဒေသမှ ရခိုင် ပြည်သူပြည်သားများမှာကား ဖယောင်းတိုင်မီးသာသာလင်းပြီး၊ အချိန်ပိုင်းသာလာသော လျှပ်စစ်မီးကို တစ်ယူနစ်မီတာခ ကျပ် ၅၀၀ပေးဆောင်နေရပေသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းအတွက် အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်များ၊ တိုင်းတာရေးစက်များ၊ဖိအားမြှင့်စက်များ တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာ နှင့် ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာ တစ်လျှောက်ရှိဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အိုးအိမ်အဆောက်အဦးများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ သိမ်းဆည်းခံရပြီး၊ထိုက်တန်သောလျော်ကြေး လည်းမရရှိပေ။
အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ စက်ရုံများ တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်းပတ်လည်တွင်လည်းငါးဖမ်းခွင့်မပြုပေ။ လယ်ယာလဲအသိမ်းခံရ၊ ငါးရှာဖမ်းစားခွင့်လဲမရှိသည့် အပြင် ဒေသခံများကိုလည်းသင့်လျှော်သောအလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးမှူလဲမရှိပေ။
ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြောပလောက်သော အစီအမံ(Social Eco Planning) တစ်ခုမှမရှိသည့်အပြင် ဒေသခံများ ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြုလုပ်ထားသော တာတမံများ၊လမ်းများကို စီမံကိန်းအတွက် ယူသုံးသဖြင့် အသုံးပြု၍မရလောက်အောင်ပျက်စီးကုန်ပြီး၊ နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင် ပေးခြင်းလည်းမပြုလုပ်ပေ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှူများကိုလဲ ရေရှည်အတွက် စနစ်တကျ ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှူ တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ခြင်း မတွေ့ရပေ။ ပင်လယ်ရေအောက် ပိုက်လိုင်းချရန်အတွက် မိုင်းခွဲဆောင်ရွက်သဖြင့်သန္တာကျောက်တန်းများပျက်စီးခြင်း၊ ရေနေသတ္တဝါအမြောက်အများသေကြေခြင်း၊ ရေနေသတ္တဝါများ စားကျက်ပြောင်းသွားသဖြင့်ဒေသခံများ ဝမ်းရေးအတွက် ငါးရှာဖွေမရခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့နေရပေသည်။ ထို့အပြင် ဓာတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ရေဆိုး ရေညစ်များ၊အညစ်အကြေးများ၊ ပလက်စတစ် နှင့် အမှိုက်သရိုက်များကိုစည်းကမ်းမဲ့ ပင်လယ်ပြင်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ကမ်းခြေတွင်စုပုံထားခြင်းတို့ကိုတာဝန်သိစိတ်မဲ့စွာ လုပ်ဆောင်နေပေသည်။
ဤစီမံကိန်းမှဒေသခံများအတွက်ပေးသော နောက်ထပ်ရလဒ်ဆိုးတစ်ခုကား အာဏာပိုင်များ၏ပံ့ပိုးကူညီမှူဖြင့် အခြားဒေသများမှမည်သို့မည်ပုံ ရောက်ရှိလာမှန်းမသိသော ဆောင်ကြာမြိုင်များ၊ အနှိပ်ခန်းများ၊ ကာရာအိုကေခန်းများ၊စားသောက်ဆိုင်များ အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အချို့ဆို မြန်မာစကားပင်မပြောတတ်ဘဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်သူတို့၏ မူရင်းနိုင်ငံဘာသာစကားဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်တောင်ချိတ်ထားလိုက်သေးသည်။
ဟိုဘက်ခြမ်းကမိမိတို့၏သံယံဇာတဖြင့် လျှပ်စစ်မီးထိန်ထိန်ညီးနေသော အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ဆိပ်ခံတံတားများ၊ စက်ရုံများကိုတွေ့မြင်နေရပြီး၊ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူလူထု၏ သားသမီးများမှာကား ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့်အမှောင်ခွင်းအလင်းဆောင်ကာ စာကျက်နေကြရပေသည်။
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်တာ စီမံကိန်းကာလအတွင်း ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ကွက်တစ်ခုထဲမှ (ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအခြားကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များမပါ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအသားတင်ရရှိမည့်ခန့်မှန်းဝင်ငွေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ငါးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော်ရှိပေမည်။
ယင်းအသားတင်ဝင်ငွေမှငါး(၅)ရာခိုင်နှုန်းမျှလောက်သောပမာဏခန့်ကိုအလွန်တရာမဖွံဖြိုးမတိုးတက်သဖြင့် ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသောလျှပ်စစ်မီးကဏ္ဌ၌ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်မသုံးစွဲလိုဖြစ်နေရပါသနည်း။
(၁၀၀%- ၅% = ၉၅%)
ကျန်ကိုးဆယ့်ငါး (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းသော အသားတင်ဝင်ငွေပမာဏကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရတစ်ခုတည်းအတွက် သော်လည်းကောင်း သို့တည်းမဟုတ် အခြား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအတွက်သော်လည်းကောင်းပြည့်ပြည့်ဝ၀သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအခြားကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များမှ ရရှိမည့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောဝင်ငွေများကိုလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင် ပါသေးတယ်။
ထပ်မံပိုင်းခြားကြည့်မည်ဆိုပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်မီးကဏ္ဌအတွက်လောလောလတ်လတ်စတင်သုံးစွဲရမည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ ဝင်ငွေပမာဏ၏ ငါး (၅) ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်ဘဲ၊ ဝင်ငွေပမာဏ၏သုညဒဿမသုညခုနှစ် (၀. ၀၇) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကိုသာ ကနဦးသုံးစွဲရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ယင်းသုညဒဿမသုညခုနှစ်(၀. ၀၇)ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် HeavyDuty Gas Turbine-Generator Set, Step-up Transformer, Step-Down Transformer,Transmission Line, Generating Station, Sub-Station များဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းငှါးရန်းခန့်အပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီး စတင်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူဖြန့်ဖြူးနိုင်ပေပြီ။
ကျန်ရှိသော လေးဒဿမကိုးသုံး(၄. ၉၃) ရာခိုင်နှုန်းမှာ နှစ်သုံးဆယ်ကာလအတွင်း ရခိုင်ပြည်တွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှူအတွက်သုံးစွဲရမည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို ငွေကြေးဖြင့် ခုနှိမ်တွက်ချက်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
ရွှေလုပ်ကွက်တစ်ခုထဲဝင်ငွေမှ ငါး (၅) ရာခိုင်နှုန်းမျှလောက်သာ။
စိုင်းဒင်အစရှိသောရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း နာမည်ကြီးတွေနဲ့မစားရဝမခန်း ချိုလိမ်ဆွဲ နှစ်သိမ့်မှူမျိုးကိုကားဘိုးဘွားလက်ထက်ကပင်ကြားဖူးနေကျဖြစ်၍၊ ထပ်ကာတစ်လဲလဲပြောသောပုံပြင်ကဲ့သို့ ရိုးအီလာချေပြီ။ကြားကောင်းအောင် ပုံပြင်နောက်တစ်ခု ပြောင်းပြောဟူ၍ပင်တောင်းဆိုရမလို ဖြစ်နေပေပြီ။
“ဒို့ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ၊ ပြည်ထောင်စုကိုအသက်ပေးလို့ ဒို့ကာကွယ်မလေ၊ ဒါဒို့ပြည်ဒါဒို့မြေ ဒို့ပိုင်နက်မြေ” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို အမှန်တစ်ကယ် ပြည်ထောင်စုကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်ဖြင့် ကြက်သီးမွှေးညှင်းထစွာ အခြားသော ပြည်ထောင်စုသားများနှင့်အတူ အမြဲတမ်းသံကုန်၊ သံပြိုင် အော်ပြီးသီဆိုချင်နေသေးလို့ပါ။
ပြည်ထောင်စုဆိုသောဝေါဟာရကို ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများ နည်းနည်းလေးခံစားခွင့်ကြုံချင်လို့ပါ။
ပြည်ထောင်စု၏အရသာကို မြည်းစမ်း ကြည့်ပါရစေ။
Posted in National Politics. LeaveaComment »
ဆွဲစားခံရသူ (သို့) ထိုးကျွေးခံရသူ အမတ်ကြီး ဘဒူမင်းညို
“ဆွဲစားခံရသူ (သို့) ထိုးကျွေးခံရသူ အမတ်ကြီး ဘဒူမင်းညို”
ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း(မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင်အစောဆုံးဧချင်း)ကို ရေးစပ်သီကုံးသူ ဘဒူမင်းညို အား မွတ်ဆလင် ဟုပြောဆိုလိုသူများသည် အဆိုပါပုခက်လွဲစာဆိုတော်အမတ် အား “ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာသက်ဝင်ယုံကြည်သူ မွတ်ဆလင်ဆွဲခန့်အမတ်ကြီး ဘဒူမင်းညို” ဟု ပုံဖော်ပြောဆိုက ပိုမိုသင့်လျော်ပေမည်။ (ယုတ္တိတန်စေရန် အကြံပေးခြင်းသာ)
ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်း စဖွင့်သည်နှင့်ပထမဆုံးအပိုဒ်တွင်ပင်လျှင် ဘုရားငါးဆူပွင့်မည့် ဤကမ္ဘာတွင် အရိမေတ္တယျမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မမူမှီ လေးဆူမြောက်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏နောက်ဝယ် ငါးထောင်သာသနာအတွင်း ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်း၌ မြောက်ဦးရွှေနန်းတည်ထွန်းပုံဖြင့် ဧချင်းအစပျိုးထားပေသည်။
အပိုဒ်ခြောက်နှင့်ခုနှစ်တွင် ဧချင်းဖွဲ့ခံရခိုင်မင်းသမီးသည် ကပ္ပိလဝတ်ပြည်ရှင် ဘေးတော်အဉ္ဇနဘုရင်မှ ဆင်းသက်လာသော ခတ္တိယအနွယ်သကျသာကီဝင်မင်းမျိုး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ဆွေတော်မျိုးတော်များဖြစ်ကြောင်းကို ပထမနှင့်ဒုတိယဓညဝတီမြို့တည်မင်းများဖြစ်ကြသော မာရယုမင်းနှင့်ကံရာဇာကြီးမင်း တို့၏မင်းဆက်ထူထောင်ပုံနှင့်သက်သေညွှန်းကာဖွဲ့ဆိုလေသည်။
အပိုဒ်ရှစ်တွင် ဤစကြာဝဋ္ဋာအနန္တ၌ အလွန်မြင့်မြတ်သော ဉဏ်ရည်အထူးကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူထသော လောကသုံးပါးတို့၏ ရှင်တော် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပုံ ကိုဖွဲ့ဆိုပေသည်။
အပိုဒ်ကိုးတွင်လည်း စန္ဒသူရိယမင်းက အဓိဋ္ဌါန်ပြု ပင့်လျှောက်သဖြင့် ဓညဝတီ ရခိုင်ပြည်သို့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင် ကြွလာပုံ။ နတ်၊သိကြား၊ ဝိသကြုံတို့ အကူအညီနှင့် ပဉ္စလောဟာရတနာတို့ ဖြင့် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအား သွန်းလုပ်ပုံ။ မြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်ငွေ့တော်ခုနှစ်ဆုပ်ထည့်ပြီး ကိုယ်စားတော်အရာထားကာ သုံးပါးနတ်လူ ကိုးကွယ်ရာအဖြစ် ခွင့်ပြုတော်မူပုံတို့ ဖြင့်စီဖွဲ့ထားပေသည်။
အပိုဒ်တစ်ဆယ့်ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင်လက်ယာမင်းနန်ကို နန်းတင်ပေးရန် ကူညီလာကြသူ မွန်နှင့်ပျူစစ်သည်တို့က မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို ဖျက်ဆီးသဖြင့် အချို့မှာရေနစ်သေဆုံးပြီး၊ အချို့လည်းနူနာဝဲစွဲ ဖြစ်ကြကာ ပြည်ရွာပျက်ပြီး သံသရာတစ်လျှောက် ပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပြီး မချွတ်ဘေးသင့်ခံရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖွဲ့ဆိုထားပေသည်။
အပိုဒ်တစ်ဆယ့်ရှစ်တွင် ကောလိယမင်းမှ မဟာထီးဘုရားဆင်းထုတော်ကြီးအားတည်ထားလှူဒါန်းခဲ့ပုံ။
အပိုဒ်တစ်ဆယ့်ကိုးတွင် ဒဿရာဇာမင်းမှ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအား ဓညဝတီမြို့ဟောင်းအနီး ကတညုတောင်တော်သို့ ပင့်ဆောင်ပြီး သိမ်၊ ကျောင်း၊ ပြဿဒ၊် ရွှေဂူဘုရား၊ကျောင်းကန် တို့ကို လက်အောက်ခံမင်းအပေါင်းတို့ဖြင့် ပေါင်းစုတည်ကာ ကောင်းမှူကုသိုလ်ပွဲများလုပ်ပြီး သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးကဲ့သို့ သာသနာတော်ကို ချီးမြှင့်မြှောက်စားပုံကို ဖွဲ့ဆိုထားပေသည်။
အပိုဒ်နှစ်ဆယ့်ခြောက်တွင် သက်တော်ရှည်ဘုရင်မင်းထီး၏ ဘုန်းတန်ခိုးထွန်းတောက်ပုံ၊ ပြည်သူနှင့်ဘုရင်အပြန်အလှန် ချစ်ခင်လေးစားပုံ၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၌ လက်စွဲတော်ပုတီးအားတင်လျှက် သစ္စာအဓိဋ္ဌါန်ပြုကာအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရှိ ရန်သူအပေါင်းအား အောင်နိုင်တော်မူပုံ နှင့် သက်တော်-၁၁၃ နှစ်၌ ဘဝပြောင်းသောအခါ နတ်ပြည်သို့ဧကန် ရောက်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးဖွဲ့ပေသည်။
အပိုဒ်သုံးဆယ်တွင် နောင်လာသောအမျိုးလေးပါးတို့ ဤမြို့တော်ကြီး၌ ကြီးကျယ်စည်ကားလာမည့်အရေး အတွက် မိမိအသက်တိုမည်ကို ပဓာနမထားခဲ့သော မြောက်ဦးရွှေနန်းတည်ဘုရင်မင်းစောမွန်သည် မြို့တည်အပြီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၌ နိဗ္ဗာန်သို့ရည်မှန်းလျှက်ငါးပါးသောအလှူကြီးပေးပုံကို ရေးဖွဲ့ထားပေသည်။
မင်းသမီး၏ဖခမည်းတော် ဘစောဖြူမင်း၏ လေး(ကမန်)အတတ်၌ကျွမ်းကျင်ပုံကို အပိုဒ်သုံးဆယ့်သုံး၌ တင်စားရာတွင် “ကြောလေးကမန်၊ ကျင်လေဟန်လည်း” ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားပေသည်။
ဖခမည်းတော် ဘစောဖြူမင်း၏ ဂုဏ်ပုဒ်ကို နိုင်ငံမင်းအပေါင်းတို့ လေးစားရမှူ၊ အစွမ်းထက်မှူကိုဖော်ကြူးရာ အပိုဒ်သုံးဆယ့်လေးတွင် သုံးပြည်သားပုန်ကန်သူတို့ကို ဖွဲ့ဆိုရာ၌ “ရိုင်းရူးမိစ္ဆာ၊ ဗင်္ဂါကုလား” ဟူ၍သုံးနှုန်းထားပေသည်။
မင်းသမီး၏ ပုခက်တင်မင်္ဂလာပြုသောအခမ်းအနား၌ ပုခက်လွဲစာဆိုတော်အမတ် ဘဒူမင်းညိုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အနှစ်သာရ တွေးခေါ် ယုံကြည်မှူများနှင့် ပြည့်လျှံထုံမွှန်းလျှက်ရှိသော၊ သကျသာကီဝင် ရခိုင်မင်းမျိုး အဆက်ဆက်တို့၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပုံကို အထူးတင်စား ဖော်ညွှန်းထားသော ဤဧချင်းကို မလွဲမသွေ ရွတ်ဆိုရပေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် ယင်းမင်းသမီး၏ ပုခက်တင်မင်္ဂလာပြုသော အခမ်းအနားတွင်ပင်လျှင်၊ သမီးတော် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ရာ စံနန်းတော်ကိုဖြိုဖျက်ပြီး၊ သိမ်တော်သမုတ်ကာ ဘုရားတစ်ဆူ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပေသည်။ မင်းသမီး၏အမည် စောရွှေကြာကို အစွဲပြုပြီး ရွှေကြာသိမ်ဘုရားဟု ယနေ့တိုင် မြောက်ဦး(မြို့ဟောင်း) မှောက်တော်(မင်းသမီး)အရပ်၌ အထင်အရှား ရှိနေတုန်းပင်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားချင့်ချိန်ကြပါကုန်၊ သံယောင်လိုက်ပြီး၊ ဓမ္မကိုအဓမ္မ မလုပ်ကြပါနှင့်။
ငြိမ်းချမ်းလို၍သော်လည်းကောင်း၊ မငြိမ်းချမ်းလို၍သော်လည်းကောင်း အမှန်ကိုအမှားမလုပ်သင့်ပေ။
ဇင်မောင်ရဲ(၂၃-၀၃-၂၀၁၃။ ခေတ္တ စင်္ကပူရ)
စာကြွင်း။ ။ မွတ်ဆလင်ဆွဲခန့် ဆိုသည်မှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် မဟုတ်ဘဲ ယင်းဘာသာဝင်ဖြစ်သည်ဟု အတင်းကာရောလိုရာဆွဲပြောခံရသူ။
ကျွန်နော်ရေးသော ဤပို့စ်ကား အမတ်ကြီးဘဒူမင်းညိုသည် ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ကြောင်းကို ရခိုင်မင်းသမီးဧချင်းပါ အကြောင်းအရာများဖြင့် ယှဉ်ထိုး ထောက်ပြလိုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်နော်အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပုတ်ခတ်လိုခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများ အချင်းချင်း သွေးကွဲဖွယ်ရာဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုခြင်း အချင်းမရှိပါ။ ကျွန်နော် ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ် ပါ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သရဏဂုံ သုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါတယ်။
January 11, 2010 — bravewaves
ရခိုင်ပြည် သို့ ဘာသာတရားများ ၀င်ရောက်ပုံ၊ ရခိုင်ဘုရင် နှင့် ရခိုင်လူမျိူး တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပုံ၊
ရခိုင်ပြည် တွင်းသို့ မူဆလင်မ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ လူမျိူးခြား တိုင်းတစ်ပါးသားများ ၀င်ရောက်လာပုံ တို့ကို
ခိုင်မာသော သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား များဖြင့် တင်ပြထားသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။
(မိမိကိုယ်ကို ရိုဟင်ဂျာ ဟု ခေါ်ဆိုလိုသူများ အပေါ် ယခုခေတ် ရခိုင်လူမျိူး တို့၏ ယထာဘူတ ကျကျ အမြင်ကိုလည်း ထင်ဟပ်ထားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။)
U Khin Maung Saw
Former Lecturer in Burma Studies, Humboldt University, Berlin, Germany.
Former ‘Scholar in Residence’, Ohio University, Athens, Ohio, USA.
To resolve personal folders Maximum File Size Exceeded Error in Outlook
January 1, 2010 — bravewaves
To resolve personal folders Maximum File Size Exceeded Error
When you start Microsoft Outlook or try to openapersonal folders (.pst) file or an offline folders (.ost) file, you may receive the following error message:
“Errors have been detected in the file . Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool.”
If you run the Inbox Repair Tool (Scanpst.exe), the file does not resolve the problem.
This problem occurs because the .pst and the .ost files havea2 gigabyte (GB) size limitation, and the error message occurs when it is exceeded. The Inbox Repair Tool cannot correct this problem.
If you’re trying to add .pst data file to your outlook profile and get the following error message:
“The file “drive:/path_to_your_.pst/outlook.pst” has reached its maximum size. To reduce the amount of data in the file, select some items that you no longer need and then permanently delete them by pressing SHIFT + DELETE”.
Obviously you cannot delete any messages because you can’t add the data file itself. This case should be only for Outlook 2003 without sp2 because it limits .pst file size to somewhat 2GB, however I encounteredasituation where this message was generated by Outlook 2007.
Fastest workaround for this is to share the .pst file and add it to outlook 2007 on another computer in you local area network and delete some messages to lower the size of .pst file. That is if you haveanetwork and another PC with outlook installed.
The other way is to download Truncation Utility from Microsoft Download Center for shrinking .pst files, and then fix the file with SCANPST.EXE.
Use the tool to createatruncated copy of the .pst file. The copy that is left after the tool completes does not have all the original data because the tool cutsauser defined amount of data from the file.
Recovery Limitations of the2GB Truncation Utility:
•	You must have2GB of free hard disk space (to makeacopy of the .pst file).
•	The utility truncates the .pst file to under2GB. To have enough working space, truncate the file between 20 to 25 megabytes (MB) less than the2GB limit. The truncated data is removed from the new copy, which means some messages are missing from the recovered copy.
You can use this process to attempt to recover the data, but is not 100 percent successful. If this tool does work, it does not recover all of the data (the truncated data is missing).
Use the following steps to recover the data:
1.	Download the tool from the following Microsoft Download Center link:
2.	Extract the 2gb152.exe file to an empty folder. You should see the following five files:
3.	Start the Pst2gb.exe program.
4.	Click Browse to select the oversized .pst file, and then click Open.
5.	Click Create, select the name and location of the truncated data file that you want to create, and then click Save.
6.	Type in the amount of the data that you want to truncate in the .pst file. There is notacorrect amount that you use. You can receive the best results if you use 20 to 25 MB, but you may have to truncate more or less. For example, if you truncate 25 MB of data and the process works, repeat the process and truncate the original oversize .pst file by only 15 MB. If that works, then try the process with5MB. If 25 MB does not work, repeat the process and truncate the original .pst by 35 MB. If the process does not work, increase the amount until the process is successful.
7.	Run the Inbox Repair Tool (the Scanpst.exe file) on the smaller .pst file.
8.	Open the repaired .pst file in Outlook.
9.	(This step is recommended but the step is optional) If the file opens, right-click the root folder of the .pst, click Properties, and then click Compact Now to start the compression. Forafile of this size, the compression may take approximately 4-8 hours.
10.	If the file does not open, discard the truncated .pst file, and repeat the process with the original .pst file. Truncate more data than in the first attempt, and try the process again.
11.	Install the following update or hotfix depending on the version of Outlook that you have. To do this, view the following article in the Microsoft Knowledge Base:
These updates prevent Outlook from allowing the .pst file to exceed the2GB maximum size. Use one of the following methods to manage the size of the .pst files:
o	Use more than one .pst file.
o	Use the archive feature.
o	Save attachments toafile system folder and delete them from messages.
၂၀၁၀ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝကြပါစေ။ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဘ၀မှာ အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြင့် လိုရာ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
Posted in Social. LeaveaComment »
Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot Open the Outlook Window Error Fix.
December 31, 2009 — bravewaves
If you receive the error “Cannot start Microsoft Office Outlook. Cannot open the Outlook window.”
The solution? simply run:
By default, Microsoft Outlook stored these PST files at the following location: “C:\_Documents and Settings\_USER_NAME\_Local Settings\_Application Data\_Microsoft\_Outlook\_”, where USER_NAME is your Windows logon name. The default PST filename for your active mailbox is Outlook.pst, while the archive file is stored as archive.pst.
The regular Outlook error message that notifies you aboutadamaged PST file is: “Errors have been detected in the file ‘file_path’. Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool.”
The Microsoft Inbox Repair Tool isasingle-file executable program, file named Scanpst.exe. By default, Microsoft Outlook will install the Scanpst.exe file within your Program Files folder, in ‘C:\_Program Files\_Common Files\_System\_MSMAPI\_1033’.
Make sure Microsoft Outlook is not running when you try to run the Inbox Repair Tool.
Then make sure you copied the Scanpst.exe file to the right location. If you still have problems running it, then search your hard disk forafile named “CNFNOT32.EXE” then run it: it should unpack and copy the Scanpst.exe file to its default path (‘C:\_Program Files\_Common Files\_System\_MSMAPI\_1033’).
Once you started the Inbox Repair Tool, use the Browse button to select your personal PST file. Remember, its default location is “C:\_Documents and Settings\_USER_NAME\_Local Settings\_Application Data\_Microsoft\_Outlook\_”, where USER_NAME is your Windows logon name. Then click on the Start button. When the scanning process is done, you should seeanotification screen.
Make sure you mark the checkbox for makingabackup of the scanned file, then click on the “Repair” button. When this process is done, you should be able to properly start Outlook and use your recovered personal Outlook folders.
What if the Inbox Repair Tool doesn’t recover my damaged PST file?
• If you are using Microsoft Outlook 9x, 2000 or 2002 and if the Inbox Repair Tool returns the following error: “Fatal Error: 80040900”, it is likely that your PST file exceeded the maximum file size of 2Gb. To resolve this problem, see this Microsoft article .
• If you are using Microsoft Outlook underaCorporate or Workgroup environment, then use the Inbox Repair Tool with Corporate or Workgroup option.
ဤဘလော.ဂ်ရှိစာများသည် တစ်စုံတစ်ရာအပေါ်တွင် ခံစားမိသော ကျွန်တော့အမြင် ကျွန်တော့အတွေး များသာဖြစ်ပါသည်။
သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်တော် ခံစားမိသော အကြောင်းအရာတစ်ခုခု ကို ကျွန်တော့်အမြင်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
မှားသည်ရှိသလို မှန်သည်လည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အမြင်တူသူများရှိနိုင်သလို အမြင်မတူသူများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အမြင်တူသူများကထောက်ခံကြပြီး အမြင်မတူသူများကဆန်.ကျင်ကြပေလိမ်.မည်။ ဤသည်ပင်လျှင် လူလူချင်းမျှဝေခံစားတတ်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ဤဘလော.ဂ်သို. လာရောက်ကြည်.ရှုသူ အားလုံးကို